Isikhwama Sokudla Sepulasitiki
Isikhwama Sokukhiqiza Sepulasitiki
Isikhwama Sokuqandisa Wepulasitiki
Isikhwama Sokudla sePlastiki
Isikhwama Sezikibha Zepulasitiki
Isikhwama Esithwala Ipulasitiki
Aphathe Isikhwama Sokuthenga
Isikhwama Somthende Wepulasitiki
Isikhwama sikadoti sePlastiki
Isikhwama sikadoti esivalwe ngenkanyezi
Isikhwama sikadoti esivalwe phansi
Isikhwama sePlastiki sokudonsa udoti
Isikhwama sikadoti esinephunga elimnandi
Isikhwama Semfucuza Yezilwane Ezifuywayo
Isikhwama sepulasitiki esingaboli
I-EPI Degradable Bag
Isikhwama Sezinkwa Zepulasitiki
Ifilimu yokupakisha yePlastiki yePolyethylene
Ifilimu Yokwelula Yepulasitiki
Imikhiqizo Yepulasitiki Elahlwayo
Indwangu Yethebula Elilahlwayo
Isikhwama sePlastiki Biohazard
Isikhwama Self Seal Poly
Ukucaciswa kosayizi wesikhwama se-vest yepulasitiki ukuthi iyiphi inqubo yokukhiqiza isikhwama se-vesti
Iyini isikhwama se-vest Isikhwama se-vest, esaziwa nangokuthi isikhwama se-vest, isikhwama sepulasitiki esivamile, ngoba ukwakheka kwaso kufana ne-vest, ebizwa kanjalo. Ukwenza isikhwama se-Vest kulula, esisetshenziswa kakhulu, sivame ukusetshenziswa ezitolo ezinkulu, ezitolo ezinkulu, esitolo esidayisa umphakathi, isimo semakethe yomlimi, sesiphenduke indis...
Izindlela zokuthenga izikhwama zepulasitiki
1, okokuqala ukubona ukuthi ukubukeka kwesikhwama sepulasitiki kunesibonakaliso "sokudla". Ngokuvamile lolu phawu kufanele lube ngaphambili kwephakheji, endaweni evelele. Okwesibili ukubona umbala, ngokujwayelekile, izikhwama zepulasitiki ezinombala zisebenzisa imfucuza yezinto ezigaywa kabusha zepulasitiki, akukho...
Isikhwama Sepulasitiki Umkhiqizi Wemikhiqizo Yepulasitiki
I-DEZHOU DONGYU PLASTIC & PACKAGING CO., LTD ingumkhiqizi onelayisensi futhi ihweba ngebhizinisi lesimanje. Sisebenza nezinombolo zemikhiqizo ye-Polythene (i-HDPE&LDPE&LLDPE) ukuze sikunikeze ikhwalithi engcono kakhulu ngentengo engcono kakhulu… intengo eqondile efekthri kuwe. Inkampani ithatha indawo ephelele ye-3,00 ...
Ikhava Yethebula Lepulasitiki Elimibalabala Elilahlwayo Ikhava Yethebula Lepulasitiki
Indwangu yetafula esebenzayo inaka umsebenzi wayo, izithembiso zezinto ezibonakalayo okufanele zinikezwe kuqala ngepulasitiki, umbala uphinda futhi. Njengomphumela wekhwalithi yetafula iphakama futhi iphakeme, imindeni eminingi ayisebenzisi indwangu yetafula ye-ante ngokuvamile, lapho isivakashi siyisitolo esilula endaweni eyodwa-...
uyini umgomo wokuwohloka "we-oxidation biological degradation double degradation ecological plastic technology"?
Ubuchwepheshe bokubola okunezithako kwepulasitiki okune-oxidative biodegradable ngemva kokusetshenziswa (njengokulahlwa endaweni evamile yezinto eziphilayo) ngemva kwesikhathi esithile, umkhiqizo ungabola ngokwemvelo ube amanzi, isikhutha kanye ne-biomass yamangqamuzana, futhi awekho ama-polymers ephilayo asele kuleso . .
Mayelana ne-oxidative biodegradation yezikhwama zepulasitiki
Ungagoqa kanjani izikhwama zegrosa ukuze uzigcine
I-Plastic Bag Material - Umehluko ku-HDPE kanye nezikhwama ze-LDPE
Umehluko obaluleke kakhulu phakathi kwe-HDPE ne-LDPE ukuthi i-HDPE iyi-polyethylene ephezulu futhi i-LDPE i-polyethylene ephansi. Amandla adonsela phansi ahlukile :Ukuminyana kwesihlobo se-HDPE ngu-0.941~0.960, ukuminyana kwe-LDPE 0.915 ~ 0.940. Ukubukeka akufani neze,isimo sokuqala se-HDPE simhlophe...
Ukusetshenziswa kahle kwezikhwama zikadoti
Indlela efanele yokusetha isikhwama semfucumfucu ilula kakhulu, isikhwama semfucumfucu sisuswe ngemva kokujikijela kanzima okumbalwa, bese isikhwama sikadoti sibheke phansi phezu komgqomo kadoti, ngesandla sizocindezelwa emgqonyeni kadoti, hhayi nje kuphela ngeke singcolile. izandla, kodwa futhi ezingokoqobo kakhulu. Isikhwama sikadoti siyindi...
Indlela Izikhwama Zepulasitiki Zisetshenziswa Kanjani Kabusha
Ukugaywa kabusha kwezikhwama zepulasitiki kungahle kuhlukaniswe izigaba ezimbili: Esinye yizicucu zefekthri ye-resin, kuyindlela elula yokuvuselela, ngemva kokuncibilika kabusha kungenziwa imikhiqizo yepulasitiki engcono. Okunye ukugaywa kabusha kwamapulasitiki axubile ngemuva kokusetshenziswa, lapho kuphela amanye ...
Yenziwa kanjani i-PLASTIC BAG
1, ngokwenani lama-oda wefilimu efuthayo, ifilimu efuthayo isho izinhlayiya zepulasitiki ezishisiswe futhi zincibilike, zikhishwe nge-extruder, bese zifuthwa zibe ifilimu yepulasitiki ngenqubo yokucubungula ipulasitiki yokufutha. Isikhwama se-plastic vest esisebenzisa i-high density polyethylene (i-HDPE, eyaziwa nangokuthi i-low pres...
Isiteshi Sebhasi Esingaphandle, i-Yucheng City,
Idolobha laseDezhou, Isifunda saseShandong, eChina